“सरकारले बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई वेवास्ता गर्यो ”
काठमाडौं – माघ २२
बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरु लाई सरकारले चासो नदिएको रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपाल संस्थाका अध्यक्ष उत्तम अधिकारीले आरोप लगाएका छन ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि १० लाखसम्म सहुलियत कर्जाको नीतिगत ब्यबस्था गरेपनि ब्यबहारगत रुपमा कार्यान्वयन हुनै नसक्ने देखिएको छ । उक्त कर्जा प्रवाहमा विदेशबाट आर्जित सीपका प्रमाणपत्रको आधारमा मात्रै कर्जा प्रवाह हुने भनिएको छ ।
विदेशदेशबाट फर्केका युवालाई उनीहरूको ज्ञान तथा सीपसँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना धितोमा लिई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो । बोर्डबाटै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न सीप सिकेर प्रमाणपत्र नभएका युवाको सीप परीक्षण गरी प्रमाण पत्र दिने कार्यक्रम पनि सुरु गरिएको थियो । सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न सीप आर्जन गरी स्वदेश फर्केका युवाको सीप परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको थियो । पहिलोपटक सुरुभएको यस कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगारीमा सिकेको सीप परीक्षणमा उत्तीर्ण हुनेलाई सम्बन्धित सीपको प्रमाणपत्रसमेत दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने यदि त्यसो हो भने, सिपको प्रमाणपत्र प्राप्त नगर्ने, बिदेशमा अनेकौं पिडा सहेर पासपोर्ट समेत गुमाएर एक्जिट पास लिएर स्वदेश फर्किएका हजारौं पिडित महिला, विदेश गएर पनि केहि कमाउन नसकेका गरिब समूहलाई सहयोग गर्ने को हो त यो मुलुकमा ?
अध्यक्ष उत्तम अधिकारीले बताए ।
पत्रकारहरु सङ्ग कुरा गर्दै भने “साङ्गठनिक अभियानमा बाहिर दौडिरहेका छौं, सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रम चलिरहेको छ । धेरै साथीहरू सङ्गठित हुनका लागि आतुर हुनुभएको छ । हामी फोन धान्नसमेत सकिरहेका छैनौं ।” स्वदेश फर्केकाको सीप, अनुभव र पुँजीलाई राज्यको समृद्धि प्राप्ति र स्वयं व्यक्तिको आर्थिक विकासमा टेवा पुयाउन संस्थामार्फत्सङ्गठित भए पनि राज्यले सयोगमा चासो नदेखाएको आरोप लगाए ।
विदेशबाट फर्किएका तर आफ्नै पूँजी लगानी गर्न नसकेर भौतारिएका श्रमिकलाई सीप र क्षमताअनुसारको रोजगारीको व्यवस्था गर्नहामीले छलफल र परामर्श गरिरहेका छौं आशा छ सरकारले हातेमालो गर्ने छ । अब पुँजीलाई लगानी र उत्पादनमा जोड्न खोजिरहेका छौं । सम्पुर्ण युवा शक्ति र पुँजीलाई एकीकृत गरि लगानी गर्ने सोचमा छौं ।
राज्यले ३२% सम्म जीडीपीमा योगदान गर्ने प्रवासी श्रमिकलाई कुनै क्षेत्रमा सम्मान गर्न सकेको छैन किन ? नविदेश बस्दा ढुक्कले बस्न दिएको छ ? , न स्वदेश फर्किएपछी सामाजिक उत्तरदात्यिव सहित पहिचानयुक्त शक्तिको रुपमा स्वीकारेको छ?
नआउदा जादा एयरपोर्टमा सम्मान छ ?
स्वदेश फर्किएपछी आफ्ना नागरिकले बिदेशबाट हासिल गरेका सीप, अनुभव र पुंजीलाई समेत बेवास्ता गरिएको छ ? विदेशबाट घर फर्किंदा परिवारका लागि बोकेर ल्याएका सामग्री समेत बरामद गरिएको छ ? विदेश हुन्जेल बिभिन्न नाउँमा हली बनाउने, जोताउने र फाइदा लिने तर स्वदेश फर्किने क्रममा र फर्केपछि बेवास्ता गर्ने, पहिचान नगर्ने र सबैतिरबाट अपहेलना गर्ने नेपालका सबै शक्ति र बिध्यमान प्रणाली बिरुद्ध लड्नै पर्ने परिस्थिति जबर्जस्त रुपमा श्रीजना हुँदैछ । के नेपाल सरकार ति निमुखा गरिबप्रति उत्तरदायी, जवाफदेही र सहयोगीको रुपमा उभिनु पर्दैन ? बैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई सहयोग गर्ने नाउँमा जसलाई सबैभन्दा बढी सहयोगको आवस्यकता परेको छ। , त्यहि समुह छुट्ने नीतिमा समर्थन जनाउन सकिदैन । बिदेशबाट फर्किएकालाई जम्मा २० वटा पेशामा सिप परिक्षणको लागि आव्हान गरियो, त्यस भन्दा बाहिरका सयौं सिप बोकेर आएका तर सिपको प्रमाणपत्र नपाएका हजारौं नागरिकको हकमा राज्य मौन बस्न सुहाउछ ? हाम्रो सिधा माग छ बार्है महिना जुनसुकै सिप सिकेर स्वदेश भित्रीएका नागरिकलाई सिप परिक्षणको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ | सहुलियत कर्जाका लागि सिपको प्रमाणपत्र अनिबार्य गर्ने तर सिप परिक्षणलाई सिमित सीपमा संकुचन गरेर सम्बन्धित सबै नागरिकलाइ न्याय हुन्छ र ? ” रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपालका अध्यक्ष उत्तम अधिकारीले बताए ।
Source: Nayakhoj (link: https://nayakhoz.com/2019/02/2122?fbclid=IwAR1WjfZRkiMeE9PxnY6Y8k_4GP3dNZGkjoaKKMybFNNUov_4gb4bMPJp5Qs )